Nhau - Is 1060nm Diode Laser Slimming Machine Imwe Nani Iri Nani Kune Yakaomarara Belly Mafuta, Rudo Anobata Uye Mamwe Mafuta Emuviri?
Kana iwe wakamboedza zvakaoma kubvisa akasindimara mafuta emudumbu, rudo anobata uye mamwe marudzi emafuta emuviri, iwe pasina mubvunzo wakateerera kune mazhinji terevhizheni kushambadza kweColorSculpting. Aya ma ads anosimbisa kugona kusingakuvadzi kugona kwekubvisa mafuta anosara mushure mekudya uye kurovedza muviri kwakubatsira iwe kurasikirwa uremu. Mushure memakore mazhinji ekurapa varwere uye kuita zviuru zvekushongedzwa maitiro, ndasvika pakufunga kuti kumwe kurapa kusinga tsvage imwe nzira iri nani kune vazhinji varwere. Iyo yekurapa ndeye 1060nm diode laser slimming muchina unopisa mafuta.
Panzvimbo pekushandisa inotonhora, 1060nm diode laser slimming muchina inoshandisa kupisa kubva ku lasers kuuraya mafuta maseru. Iine maitiro akafanana - mafuta maseru anonangwa, kuurawa, uye zvishoma nezvishoma kuburitswa nemuviri. Mukufamba kwemwedzi mishoma mushure mekurapwa kwako, iwe uchaona kudzikiswa kwemafuta munzvimbo yakanangwa.
1060nm diode laser slimming muchina wakanakira vanhu vane nzvimbo diki dzemafuta akasindimara asi neimwe nzira vari mumuviri wakanaka. Mhedzisiro yacho ndeyekusingaperi sekureba sekunge murwere achichengeta huremu hwavo uye hutano hwepanyama.
Chimiro cheichi mudziyo chinoita kuti zviome kushandisa pazvikamu zvemuviri zvakakombama, saka zvishoma zvishoma kupfuura zvimwe zvingasarudzwa. Vamwe varwere vanoti vanonzwa kutsva zvishoma nekuda kwekupisa, kunyangwe hazvo mudziyo uchitonhorera panguva yekurapa.
Iine 1060nm diode laser slimming muchina, hapana kukweva kana kudhonza matissue. Chigadzirwa chinorara pamusoro penzvimbo iwe yaunoda kudzikira. Laser simba rinopinda mukati menyama uye rinokonzeresa kupisa kumafuta maseru. Ivo vanogadzirirwa kufa kwema cell, uye immune system yako ichaabvisa.
1060nm diode laser slimming muchina uri nyore
Kana iwe uri munhu akabatikana (mazuva ano, ndiani asiri?) Kurapa nzvimbo mbiri mumaminetsi makumi maviri neshanu ne1060nm diode laser slimming muchina inguva huru yekuponesa kupedza awa nehafu pachikamu ne cryolipolysis. Uye sezvo pasina nguva yekudonha ne1060nm diode laser slimming muchina, unogona kugamuchira kurapwa uye dzokera kuhupenyu hwako hwakabatikana.